အလှအပရေးရာ – Page3– ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
နှုတ်ခမ်းနီ အဆီတောင့်တွေနဲ့ သင်မသိသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်အသုံးပြုနည်းတွေ
ဆောင်းတွင်းဖက်နဲ့ နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့တဲ့အခါမှာ ဆိုးလေ့ရှိပြီး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အလွယ်တကူ ဆောင် ထားနိုင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းအဆီတောင့်တွေဟာ နှုတ်ခမ်းအက်ကွဲတာကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့အပြင် တခြားအသုံးဝင်တဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
အလှအပအတွက် ပန်းသီးဗီနီဂါကို အသုံးပြုပုံ (၃) မျိုး
Apple Cider Vinegar ကို စူပါမားကတ်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်နိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်ရုံသာမက အလှအပအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းခေါင်းဖြီးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖြီးတဲ့ခေါင်းဘီးက ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားအတွက် တကယ်သင့်တော် သလားဆိုတာ မတွေးမိ မစဉ်းစားမိ တတ်ကြပါဘူး။ တချို့ ပလပ်စတစ်ခေါင်းဘီးတွေက ဦးရေပြားကို ပူလောင်စေတဲ့ အပြင် ဆံပင်နဲ့ထိတွေ့ ပွတ်သပ်မိတိုင်း အပူတွေထွက်လွယ်တာကြောင့် ဆံပင် တွေကို ကွေးကောက်တွန့်စေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ဆံကေသာအတွက် ဘာကြောင့် သစ်သားခေါင်းဘီးကို သုံးသင့်တာလဲ ဆိုတာ onlymyhealth.com ကိုကိုးကားပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာ အညိုအမည်းစက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်၊ အချိုင့်အခွက် အပါအဝင် အရေးပြားရဲ့ အောက်ဆုံးလွှာဖြစ်တဲ့ dermis ဆိုတဲ့ တစ်သျှူးစပျက်စီးမှုတွေကို သဘာဝပစ္စည်းနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်မယ်ဆို သခွားသီး ကုထုံးကိုပဲ လှပျိုဖြူတို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
မာလကာရွက်က ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်တဲ့အပြင် တောက်ပတဲ့ဆံသားတွေကို ရရှိနိုင်
စားစရာ သစ်သီးဝလံဖြစ်တဲ့အပြင် မာလကာရွက်က ဆံပင်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
မာလကာရွက်မှာ ဆံပင်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် ဘီ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဗီတာမင် ဘီ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏရရှိမယ်ဆိုရင် ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပြီး ပိုမိုသန်စွမ်းတောက်ပြောင်လာစေမှာ အသေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒူး၊ တံတောင်စတဲ့နေရာတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်ကို မဲတတ်တယ်။ အကွေးအဆန့်နေရာဖြစ်တဲ့အပြင် အရေပြားက ထူနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးခေါင်းမဲတာ အတို၊အပြတ်ဝတ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အတော် ဒုက္ခရောက်စေတယ်။
အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ အဓိကအစား အစာဖြစ်တဲ့ ဆန်မှာ ဗီတာမင်ဘီ၊ စီ၊ အီး၊ အမိုင်နိုအက်စစ်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေပါတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာရေးသာ မက အလှအပရေးရာအတွက် ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့် ဆံပင်နဲ့ အသားအရေအ တွက် ကောင်းကျိုးပြုတာမို့ ဘယ် လိုသုံးစွဲရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
သခွားသီးနဲ့ ကြက်ဥအကာ မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး
ဒီနည်းလေးကတော့ ချွေးပေါက်များကို သေးငယ်စေပြီး အသားအရေကို ကျစ်လစ်စေပါတယ်…အသားအရေတွဲကျသူတွေအတွက်လဲ ကောင်းပါတယ်….
? အအေးခံထားတဲ့ သခွားသီးတစ်လုံးကို အခွံခွာပြီး Blender ထဲမွှေပါ…
? ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့ အကာရယ်၊ ဗီတာမင်အီးတစ်လုံးရယ်၊ သံပုယိုရည် လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းရယ် ကို ရောထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ…
? ရလာတဲ့အရည်ကို မျက်နှာသန့်သန့်ပေါ်လိမ်းပေးပါ…
? မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ..
? ချွေးပေါက်များကို သေးငယ်စေပြီး အသားအရေကို ကျစ်လစ်စေပါတယ်…
? မျက်ဝန်းအောက်ဖက်ဧရိယာက အသားအရေတွဲကျသူတွေအတွက်လည်း
မျက်နှာအဆီပြန်သူ တို့အတွက် အုန်းရည်
မျက်နှာပြင်မှ အဆီပြန်၊ ချွေးထွက်လို့ စိတ်ပျက်နေသူတို့ အတွက်ပါ။ ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ ဝင်းလက်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင် အလှတွေပျက်နေတယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား။
မျက်နှာပြင်အဆီပြန်တာကို ဇျေးကြီးတဲ့ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကို တကူတက ရှာဖွေ ဝယ်ယူနေစရာမလိုပဲ လတ်ဆတ်တဲ့ အုန်းရည်ကို